မင်္ဂလာ Pongal ပုံများ 2017, ဆန္ဒရှိသော်လည်း Quotes ကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျများ Whatsapp အခြေအနေ, Facebook ကို DP
မင်္ဂလာ Pongal ပုံများ 2017 : Pongal ဆန္ဒ, Quotes ကို SMS - Whatsapp အခြေအနေ, Facebook က. အဆိုပါမင်္ဂလာပွဲတော်သည်မင်္ဂလာ Makar Sankranti တွင် 2017, အကောင်းဆုံးကိုဝေမျှဖို့တိုင်းပြည်သူ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Pongal Wish 2017, ဆွေမျိုးများနှင့်သူငယ်ချင်းများမှဟုများအတွက် Quotes နှင့်အတူ Pongal ပုံများ. သင်တို့ရှိသမျှသည်အကောင်းဆုံး Share နိုင်ပါတယ် & TOP Pongal, Bhogi, Kanuma ပွဲတော်. ဤတွင်ကျနော်တို့ထိပ်ဆုံး Pongal ပေးနေကြတယ် 2017 စာတို, မက်ဆေ့ခ်ျ & ဂုအတွက် Facebook မှာအဘို့အ Pongal Whatsapp အခြေအနေ, တမီး, Malayalam, ကန်နာဒါ, မာရသီ, ဟိန်ဒီဘာသာစကားများ. ကြိုတင်မဲကိုသင်ပျော်ရွှင် Ponga / Makara Sankranthi လို 2017 အားလုံးကို.
မင်္ဂလာ Pongal 2017 ပုံရိပ်တွေ, ဆန္ဒ, Quotes ကို SMS - Whatsapp အခြေအနေ, Facebook ကို DP ဖုံး pics
Makara Sankranthi သမိုင်း: Makar Sankranti ဟိန္ဒူပွဲတော်ယဉ်ကျေးမှုပုံစံများ၏များပြားလှအတွက်အိန္ဒိယနှင့်နီပေါနီးပါးအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်. ဒါဟာစပါးရိတ်ရာကာလပွဲတော်ဖြစ်ပါသည်. Makar Sankranti Makara rashi ၏ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာသို့ Sun က၏အကူးအပြောင်းခြေတစ်လှမ်း (Capricorn) ယင်း၏ကောငျးကငျလမ်းကြောင်းအပေါ်. အဆိုပါနေ့ကလည်းအိန္ဒိယအတွက်နွေဦး၏ဆိုက်ရောက်အထိမ်းအမှတ်ယုံကြည်သည်နှင့်အစဉ်အလာဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်. Makara Sankranthi နှစ်တိုင်း Gregorian ပြက္ခဒိန်၌တူညီသောနေ့စွဲအပေါ်ကျကြရသောအနည်းငယ်အိန္ဒိယပွဲတော်များ၏တဦးတည်းလုပ်မယ့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည် : 14 ဇန္နဝါရီလ, 2017 အဆိုပါပွဲတော်အပေါ်ဂုဏ်ပြုသည့်အခါအချို့သောခြွင်းချက်နှင့်အတူ 13 သို့မဟုတ် 15 ဇန္နဝါရီလ.
မင်္ဂလာ Pongal 2017 ပုံရိပ်တွေ, HD, နောက်ခံများ, ဓာတ်ပုံများ, pics - Gif Animation:
ဤတွင်ကျနော်တို့အကောင်းဆုံး Makar Sankranthi / Pongal / Bhogi / Knum ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း 2017 ပုံရိပ်တွေ, နောက်ခံများ & ပွဲတော်ရဲ့အကောင့်ကိုအပေါ်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆွေမျိုးနှင့်အတူမျှဝေဖို့ဓါတ်ပုံများ. ဂုအရေးပါနှင့်ထိုင်းအတွက်နွားနှင့် Rangoli Sankranthi Images ကိုထုတ်စစ်ဆေး Pongal 2017 ပုံရိပ်တွေ အကောင်းဆုံး sms ကိုအတူ kolam ရိုးရှင်းတဲ့, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
ဇန္နဝါရီလ 13 - Bhogi
ဇန်နဝါရီ 14 - Makar Sankranti / Pongal
ဇန်နဝါရီ 15 - Kanuma
ဤများမှာ3အရေးကြီးသောနေ့ရက်များဟာကိုဂုဏ်ပြုသောပွဲတော်များနှင့်လည်း AP အားဖြင့်ပြည်သူ့အားလပ်ရက်ပေးထားကြသည်, tamilnadu, Karnataka, အဆိုပါကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များမှ Telangana, တစ်ပါတ်အဘို့ရုံးများ. မိတ်ဆွေများနှင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုအချို့ပိုပြီးမင်္ဂလာ Pongal ပုံရိပ်တွေထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်ကအဆိုပါ tastier, ဆွေမျိုးသားချင်းများ, ပိတ်ပစ်.
မင်္ဂလာ Bhogi 2017: Whatsapp အခြေအနေ, Facebook မှာကိုယ်ရေးဖိုင်ပုံများ
မင်္ဂလာ Bhogi ပုံများ - Wallpaper
မင်္ဂလာ Makar Sankranthi ပုံများ 2017 - စာတို, မက်ဆေ့ခ်ျ, နောက်ခံများ
Pongal 2017 facebook ကိုအဖုံးအဘို့ရုပ်တုဆင်းတု
pongal ဂု 2017 နောက်ခံပုံများ
မင်္ဂလာ Kanuma 2017 မက်ဆေ့ခ်ျ, နောက်ခံများ, ဓာတ်ပုံများ
Kanuma ပွဲတော်ဇန်နဝါရီလ 15 ရက်နေ့တွင် Sankranthi အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကျင်းပပါလိမ့်မယ်, 2017. ၎င်း၏တစ်ဦးရွာပွဲတော်နှင့်လူတိုင်းအတွက်ထိုနေ့၌လင်းတပျံများနှင့်နွားနှင့်ကျွဲဖို့ pooja ဆုတောငျးလကျြ. Bellam နှင့် etc နှင့်အတူမီးသတ် Casting. Andhra နှင့် telangana အတွက်ကျေးရွာများအတွက်၎င်း၏အကြီးပွဲတော်, tamilnadu ပြည်နယ်များ.
မင်္ဂလာ Makara Sankranthi သီချင်းများ, Pongal ကဗျာများအိမ်တွေမှာညမှာအမျိုးသမီးသီဆိုဖြစ်လိမ့်မည်. Lakshmi Pooja သနားတျောမူပါလိမ့်မည်.
မင်္ဂလာ Pongal 2017 quotes, ဆန္ဒ, မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏, Whatsapp အခြေအနေ
Pongal တပြင်လုံးကိုပြည်နယ်ကျော်တမီးလ်နာဒူးကျင်းပမယ့်ပွဲတော်ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ပွဲတော်လေးရှည်လျားသောနေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနည်းလမ်းများနှင့်အစဉ်အလာအမျိုးမျိုးအားဖြင့်အထူးဖန်ဆင်းထားသည်.
ငါသည်သင်တို့ကိုဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခံစားပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်. အဆင်ပြေယောက်ျားတွေ, စလိုက်ကြစို့!
"ဒီပွဲတော်ကောင်းသောကံများနှင့်သာယာဝပြောတတ်၏ ရှိ. ကြောင့်ရွှင်လန်းကြောင်းမျှော်လင့်, နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူရှေ့ဆက်သင်တို့လက်ထက်၌ဖြည်.
တစ်အံ့သြစရာ Pongal ရှိသည်။ "
မင်္ဂလာ Sankranti နည်းလမ်:
S က: SANTHOSHAM
N ကို: ခြေသလုံး
K သည်: အကောက်ခွန်
R ကို: ဥပဒေ
N ကို: ဆိုး
T က: TASTER
Pongal Wish 2017 တမီးအတွက် :
ချစ်ခင်ရပါသော Murugan Naa,
သင်တစ်ဦးသည်အလွန်မင်္ဂလာ Pongal ဆန္ဒရှိ
နွားနှင့် Ox ဖို့ကြံ
တမီးအတွက် Lohri ကဗျာများသီချင်းများ
Tan ကမိန်း masti
ငါ၏အ umang လူ.
ကာ၏ Sabko Apnapan
Gud မိန်း Jaise Meethapan.
သို့မဟုတ် Bhar သည် Le Aakash ငါ့ကို Apne range.
မင်္ဂလာ Makar Sankranti
သေးပါဘူး Meethe ဂုရမိန်း Mil gaye,
Udi အဘိဓါန် Patang Aur Khil Gaye Dil,
သင်တို့ရှိသမျှသည် Makar Sankranti ယူဆောင်.
သငျသညျမင်ျဂလာ Makar Sankranti ဆန္ဒရှိ 2017
မင်္ဂလာ Makara Sankranti 2017 ဂုအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျ :
မင်္ဂလာ Makar Sankranti 2017
မင်္ဂလာ Pongal Wish & SMS ကို Quotes:
har Jeevan ဟို Khushal
မူဘာရက် HO AAPKO
"Sankranti ၏ပွဲတော်။ "
« : P V ကို Sindhu စာစီစာကုံး, ဆောင်းပါး, အတ်ထုပ်ပတ်တိ, ပရိုဖိုင်းကို
Demonetization ပြီးနောက်မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်၏ကြီးထွားပုံပြင် »